Basikety Tompondaka N1 B lehilahy Anio no hanatanterahana ny dinika teknika
UFFOI U15 2019 Lavon’i Djibouti ny Barea U15
Araka ny vokatr’ireo lalao manasa-dalana notontosaina omaly talata 19 novambra tany amin’ny kianja Mfa Astro Turf sy tany amin’ny kianja St François Xavier samy atsy amin’ny nosy
RUGBY – ELIMINATOIRE COUPE D’AFRIQUE 2010-2020 Handray an’i Nigeria etsy Mahamasina ny XV Makis
Ny lalao rugby indray no hihanoka amin’ny fandraisana lalao iraisam-pirenena etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina amin’ny alahady 01 desambra 2019 ho avy izao ka inoana fa hahafeno hipoka an’ity kianja ity indray amin’izany fotoana izany.
Kandidà Gasy N°3 Nanolotra « Tournoi Pétanque » ho an’ny tanoran’Andoharanofotsy
Nanolotra « Tournoi Pétanque » ho an’ny tanora tao Andoharanofotsy, ny kandida Ranary Lala na Gasy N°3 ao anaty bileta tokana.
Anio zoma 31 mey 2019 takariva no hanatanterahana, ao amin’ny hôtel Manimbolo Tsiroanomandidy, ny dinika teknika amin’ny fanatontosana ny fifaninanana basikety fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara
sokajy N1 B lehilahy hatao ao amin’ny kianja Bika sy ao amin’ny kianja ivelan’ny Ceg any Tsiroanomandidy, manomboka rahampitso sabotsy 01 jona ka hatramin’ny 09 jona 2019 ho avy izao. Marihina fa ekipa 18 avy amin’ny ligim-paritry ny taranja basikety miisa 12 no voafidy handray anjara amin’ny fifaninanana. Nozaraina anaty vondrona 4 misy ekipa 5 avy dia ny ASM sy BCKB ary BCBVS avy any Bongolava, ny TMBB sy DTSC ary NGB avy eto Analamanga, ny MBC sy COSPN 2 avy any Atsinanana, ny SBC sy CBBU Vakinankaratra, ny BCF Amoron’i Mania, ny USF Matsiatra Ambony, ny ASB Itasy, ny JCM Atsimo Andrefana, ny Hff-Somava SAVA, ny AS DALTON V7V, ny FANALOLAHY Atsimo Andrefana ary ny BBCA avy any Alaotra Mangoro. Izay ekipa 4 voalohany tafavoaka amin’ny fifanintsanam-bondrona no hiatrika ny 1/8-dalana ary dia manomboka eo ny fihintsanana mivantan’izay resy. Ireo ekipa 3 voalohany amin’ny filaharana ofisialy amin’ity N1B 2019 ity no hiakatra N1A amin’ny taom-pilalaovana manaraka.